Wabiga Jubba oo degaano fatahaad ka sameeyay | warsanradio baydhabo
Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed Oo War Kasoo Saaray...
Home WARARKA MAANTA	Wabiga Jubba oo degaano fatahaad ka sameeyay
Wabiga Jubba oo degaano fatahaad ka sameeyay
Wabiga Jubba ee mara degaano ka tirsan Gobolada Jubbooyinka iyo Gedo ayaa saacadihii la soo dhaafay waxaa uu fatahaad ka sameeyay deegaanka Buulo-gaduud oo qiyaastii 30-km dhanka waqooyi kaga beegan Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose.
Fatahaada ayaa dadka deegaanka waxaa ay sheegeen in uu baabi’iyay dhul beereed aad u ballaaran oo ku yaallay jiinka webiga,sidoo kalena ay barakaceen dad deganaa meelo kamid ah degaanka.
Mid kamid ah dadka degaanka Buulo-gaduud oo lagu Magacaabo Maxamed Faarax ayaa sheegay in Fatahaada Wabiga uu qaadday dalagyadii ay sugayeen oo ay beerteen, isagoo dowlad goboleedka Jubbaland iyo hay’adaha ka shaqeeya arrimaha beeraha ugu baaqay in ay gurmad usoo fidiyaan.
Dhinaca kale Guddoomiyaha deegaanka Buulo-gaduud ayaa sheegay inay wadaan dadaalo lagu xirayo goobaha uu webiga kasoo fatahay,isaga oo ugu baaqay madaxda dowlad goboleedka Jubbaland in arrintaasi gacan lagu siiyo.
Horay ayaa Wabiga Jubba waxaa uu fatahaad ka sameeyay degaano ka tirsan Gobolka Gedo oo ay kamid tahay degmada Baardheere,isla markaana gurmad kala duwan loo sameeyay.
Wabiga Jubba oo degaano fatahaad ka sameeyay was last modified: June 22nd, 2020 by Admin
Akhriso:-Taariikhda Maareeyaha Hay’adda Duulista Rayidka ee madaxweynuhu magacaabay
Akhriso:-Kulanka Khamiis laha a haa ee Golaha wasiirrada Soomaaliya Oo Looga Hadlay Tirakoobka Shaqaalaha iyo Qorshaha Dayn Cafinta
Golaha naafada Qaranka oo wada-tashi looga hadlayey Qabyo-Qoraalka sharciga naafada ku soo gabogabeeyey magaalada Samo-reeb “SAWIRRO”